मिर्गौला रोग भनेको के हो ? कति प्रकारका हुन्छन् ? « Dhankuta Khabar
मिर्गौला रोग भनेको के हो ? कति प्रकारका हुन्छन् ?
प्रकाशित मिति : Mar 8, 2018
समय : 5:58 AM
मिर्गौलाको दुवैतर्फको रत्तःनली साँघुरिएमा । आदी।-स्वास्थ्य खबर पत्रिका
धनकुटामा जेष्ठ नागरीकहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच
बच्चालाई ३ वर्ष सम्म यी १० खानेकुरा खुवाउनुहोस्
विमान दुर्घटना : ३ पटकका गोल्डमेडलिस्ट न्युरो सर्जन डा बालकृष्ण थापाको निधन